Rahoviana ny fihaonambe an-tserasera manaraka anao? | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 26, 2010 Alarobia, Novambra 5, 2014 Douglas Karr
Ny sasany amin'ireo orinasa miara-miasa amiko, indrindra ny orinasa na orinasa (B2B) dia mahita valiny tsy mampino ary miverina amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampiasana hetsika virtoaly sy varotra. Efa ela aho no naniry ny handefa momba ny varotra hetsika virtoaly, ary vao haingana aho no niresaka Unisfair, ny hetsika virtoaly mitarika, tradeshow virtoaly ary mpamatsy asa ara-tserasera an-tserasera.
Unisfair dia manolotra lozisialy iray manontolo ho toy ny sehatra Serivisy, ao anatin'izany ny rindrambaiko fihaonambe, rindrambaiko webcasting, chat amin'ny Internet, fanangonana firaka ary fitaovana fanaovana tatitra. Tsy toy ny fihaonambe nentim-paharazana izay sarotra ny manara-dia ireo mpanatrika, ny valan-dresaka virtoaly dia mamela anao hanaraka ny zava-drehetra! Ho fanampin'ny fihenan'ny vidiny isaky ny firaka, orinasa maro no mandray kaonferansa virtoaly ho tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana ihany koa.
Tamin'ny fanadihadiana tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Unisfair dia nahita 48 isan-jaton'ny mpivarotra mikasa ny hitombo ny fampiasan'izy ireo hetsika virtoaly amin'ny taona ho avy. Ny antony malaza indrindra amin'ny fananganana hetsika virtoaly dia ny manitatra ny fahazoana marketing (32 isan-jato) ary ampitomboy ny habetsahan'ny firaka (15 isan-jato).
American Business Media dia nitatitra fa 75% amin'ireo mpanapa-kevitra momba ny orinasa nohadihadiana dia nilaza fa nanatrika hetsika telo na mihoatra Web nandritra ny 12 volana lasa. Marketing Sherpa dia nitatitra fa ny fivoriana virtoaly dia nitombo 37% ho loharanom-baovao nandritra ny tapany voalohan'ny taona 2009. Tetibola henjana kokoa momba ny dia, ny tambajotran-tserasera fipoahana ary ny fikarohana ireo fitaovana fitarihana mitarika vaovao no nitambatra mba hampisondrotra ity fitomboana haingana ity.
Iray amin'ireo an'ny Unisfair i Ariba tantara mahomby. Ariba dia orinasam-pitantanana manerantany izay nahatsapa fa ny toekarena dia hisy akony amin'ny olona mandeha amin'ny fihaonambe manaraka. Nampiasa ny sehatry ny Unisfair izy ireo, namindra ny kaonferansa ara-batana an-tserasera izy ireo ary nahazo tombony be dia be, ka nahatonga ny fisoratana anarana 2,900, mpanatrika 1,618 4,000, fampidinana 5,200, fitsidihana booth 538, resaka 1,078 natomboka ary hafatra XNUMX XNUMX! Fandraisana andraikitra mahafinaritra izany!
Torohevitra 3 momba ny varotra hetsika virtoaly
Joerg Rathenberg, talen'ny marketing an'ny Unisfair, dia nanome ireto torohevitra manaraka ireto amin'ny marketing amin'ny hetsika virtoaly:
Talohan'ny hetsika: Manomboha miomana aloha, toy ny hataonao amin'ny fihaonambe ara-batana na hetsika iray. Hamarino tsara fa manana drafitra famoronana taranaka mpihaino ianao. Mahaiza mamorona ary miezaha hanao ilay traikefa ho mahasarika araka izay azo atao. Ohatra, mandefasa fonosana hetsika miaraka amin'ny fitaovan'ny kaonferansa, ohatra: T-shirt ho an'ireo mpiraki-draharaha raha miatrika izany ianao. Omeo farango ho an'ny tambajotra sosialy ahafahan'ny mpiangona mizara ilay fanasana amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Aza hadino ny mampiditra atiny mahafinaritra miaraka amin'ireo mpandahateny afaka manintona vahoaka. Ny atiny tsara no lakilen'ny hetsika virtoaly mahomby! Hamarino fa manana ny fotoana fanombohana amin'ny kalandrie ny fomba fijerin'izy ireo.
Nandritra ny hetsika: Ampidino ho faribolana kely kokoa ny fotoam-pivorianao - mandritra ny hetsika virtoaly dia tsy mitovy ny fahitan'ny olona ny mpanatrika ara-batana. Hitanay fa 20 min no halava tsara indrindra. Hamarino tsara fa misy ny mpandahateny omenao amin'ny chat ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Omeo fotoana betsaka hifandraisana, hifandraisana ary hifandraisana. Leverage polls sy fampidirana haino aman-jery sosialy hamoronana buzz sy handraisana ny maripanan'ny hetsikao. Ny tatitra amin'ny fotoana tena izy dia hilaza aminao ny zava-mitranga. Mampiasà hafatra hitarika ny olona ho any amin'izay misy ny hetsika. Omeo famporisihana ny mpanatrika hirotsaka, toa ny fifaninanana na ny sary.
Taorian'ilay hetsika: Ny hetsika virtoaly dia mivoatra haingana ho sehatra fifamatorana virtoaly foana. Ny atiny rehetra misy anao, ao anatin'izany ny Q&A, dia tokony ho azo avy hatrany amin'ny fangatahana aorian'ny faran'ny fizarana mivantana. Matetika ny 50% amin'ireo mpirotsa-taratasy no miseho mivantana. Hamarino tsara fa mahazo ny 50% hafa hanatrika izany ianao - aoriana kelin'izay. Fitaovana fanararaotana toy ny Unisfair's Engagement Index hanomezana toerana ny mpihaino anao miorina amin'ny demografika, ny hetsika ary ny zavatra mahaliana azy ireo ary hanome an'ity fampahalalana ity ho an'ny ekipanao ho tohiny Ny hetsika virtoaly dia manana tombony hahafantaranao izay rehetra nataon'ny mpanatrika iray fony izy teo amin'ny tontolo iainanao. Omeo an'ity ekipa fivarotana ity izany fampahalalana marobe izany mba hahazoana antoka fa afaka manohy ny resaka izy ireo.
Ny mpilalao sasany eny an-tsena dia InXpo, ON24, Expos2, Toerana faharoa ary 6Connex. Mbola tsy vonona ny hiala amin'ny hetsika ara-batana aho izao - hitako fa sarobidy loatra amin'ny tambajotra amin'ireo mpanatrika hafa. Satria afaka manomboka amin'ny $ 50k ny vidin'ny kaonferansa, tsy maintsy atao ny fihaonambe virtoaly. Hanintona olona maro ianao izay manana vinavina lehibe nefa manalavitra ny vola lany na ny fahasahiranana amin'ny dia.
Tags: Fandaminana hetsikazava-mitrangaconference onlineunisfair
Ohatrinona no aloanao amin'ny Analytics maimaim-poana?